ဗီဒီယိုရိုက်နေမှန်းမသိပဲ ပို့စ်တွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးလုပ်နေတဲ့ သမီးလေးIvy ကိုကြည့်ပြီး သဘောတွေကျနေတဲ့ အေသင်ချိုဆွေ - Media Update News
ဗီဒီယိုရိုက်နေမှန်းမသိပဲ ပို့စ်တွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးလုပ်နေတဲ့ သမီးလေးIvy ကိုကြည့်ပြီး သဘောတွေကျနေတဲ့ အေသင်ချိုဆွေ
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် အေသင်ချိုဆွေကိုတော့ အထူး အထွေ မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ် မယ် ထင်ပါတယ်. ။ အေသင်ကတော့
အသံပါဝါကောင်းကောင်း နဲ့ အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ထွက်သမျှ အယ်လ်ဘမ်တိုင်းကလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ တခဲနက် အားပေးမှုတွေကို ရရှိထားခဲ့သူပါ. ။
လက်ရှိမှာ အနုပညာလောကနဲ့ အနေဝေးနေပေမယ့် Single Mother တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်ကာ သူမရဲ့ ချစ်စရာ သမီး လေး Ivy နဲ့ ဘဝကို ပျော်ရွှင်ပေါ့ပါးလွတ်လပ်စွာ
ဖြတ်သန်းနေသူ ပါ .။ သမီးလေး Ivyကို ချစ်မြတ်နိုးသူ ပရိသတ်တွေအတွက်လည်း ပိုစ့်လေးတွေ တင်ကာ မျှဝေတတ်ပါသေးတယ် ။ ဒီကနေ့မှာလည်း
အေသင်က Ivyလေး တစ်ယောက် ပျော်ရွှင်စွာ လျှောက်လည်ရင်း အသည်းပုံစံ ပိုစ့်ပေးကာ ဓာတ်ပုံရိုက်ခံနေပုံ ဗီဒီယိုလေးကို “သူပျော်နေတာ” ဆိုပြီး သူမရဲ့
လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာပေးမှာ တင်လာခဲ့ပါတယ် .။ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ Ivyလေးရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်. ။
ဗီဒီယို႐ိုက္ေနမွန္းမသိပဲ ပို႔စ္ေတြတစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳးလုပ္ေနတဲ့ သမီးေလးIvy ကိုၾကည့္ၿပီး သေဘာေတြက်ေနတဲ့ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ
ပရိသတ္ႀကီးေရ အဆိုေတာ္ ေအသင္ခ်ိဳေဆြကိုေတာ့ အထူး အေထြ မိတ္ဆက္ေပးစရာမလိုေအာင္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္ မယ္ ထင္ပါတယ္. ။ ေအသင္ကေတာ့ အသံပါဝါေကာင္းေကာင္း နဲ႔ အဆိုေတာ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ထြက္သမွ် အယ္လ္ဘမ္တိုင္းကလည္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕ တခဲနက္
အားေပးမႈေတြကို ရရွိထားခဲ့သူပါ. ။ လက္ရွိမွာ အႏုပညာေလာကနဲ႔ အေနေဝးေနေပမယ့္ Single Mother တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ကာ သူမရဲ႕ ခ်စ္စရာ သမီး ေလး Ivy နဲ႔ ဘဝကို ေပ်ာ္႐ႊင္ေပါ့ပါးလြတ္လပ္စြာ ျဖတ္သန္းေနသူ ပါ .။ သမီးေလး Ivyကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ ပရိသတ္ေတြအတြက္လည္း
ပိုစ့္ေလးေတြ တင္ကာ မွ်ေဝတတ္ပါေသးတယ္ ။ ဒီကေန႔မွာလည္း ေအသင္က Ivyေလး တစ္ေယာက္ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေလွ်ာက္လည္ရင္း အသည္းပုံစံ ပိုစ့္ေပးကာ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ခံေနပုံ ဗီဒီယိုေလးကို “သူေပ်ာ္ေနတာ” ဆိုၿပီး သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပးမွာ တင္လာခဲ့ပါတယ္ .။ ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းတဲ့ Ivyေလးရဲ႕ ဗီဒီယိုဖိုင္ေလးကို ပရိသတ္ႀကီးအတြက္လည္း ျပန္လည္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္. ။
Previous Article သူမဘဝတစ်သက်လုံး လုံးဝမေ့လို့မရနိုင်တော့မယ့် ပကာသနမပါတဲ့မွေးနေ့အမှတ်တရပုံရိပ်တွေကိုကြည်နူးစွာနဲ့ပြသလာတဲ့ မေတိုးခိုင်
Next Article ပရိတ်သတ်တွေအပေါ် အချိန်အကြာကြီးပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကို ဒီကနေ့မှာလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ မင်းသားချော ကျော်ဆု